စကျတငျဘာ 12, 2019 – Healthy Life Journal
အတွင်းတိမ်နှင့် ရေတိမ်ရောဖြစ်နေလျှင် အတွင်းတိမ်ခွဲလိုက်ပါက ရေဖိအား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျနိုင်
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အတွင်းတိမ်ကမာပြီး ရင့်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ ရေတိမ်ဝင်သွားတဲ့ အခြေအနေဆိုရင် ဘယ်လို ကုသမှုပေး ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. အတွင်းတိမ်က မာကျောပြီး ရင့်နေတဲ့ အဆင့်မှာဆိုရင်...
လေပွခြင်း ကင်းစေမည့် နည်း ၉ သွယ်
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) ရေသောက်ပါ။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေပါစေ။ (၂) ငှက်ပျောသီး စားပါ။ (၃) ဆားစားသုံးမှုကို လျှော့ချပါ။ (၄) ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ပေါင်မုန့်) စတာတွေကို လျှော့စားပါ။ (၅) ၀မ်းဗိုက်အပေါ်နေရာကို ညင်ညင်သာသာနှိပ်ပေးပါ။...
နာနတ်သီး၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး ၁၀
(၁) စွမ်းအင်တိုးစေပါတယ်။ (၂) ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေပါတယ်။ (၃) သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၄) ကိုယ်ခံအား မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၅) နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ သက်သာစေပါတယ်။ (၆) ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျစေပါတယ်။ (၇) အမြင်အာရုံ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၈) ဗီတာမင်ဘီအုပ်စု ပါဝင်မှုများပါတယ်။...